Zipu Email Via SMTP Na WordPress Na Google Workspace na Nyocha abụọ-Nyocha | Martech Zone
Zipu Email Via SMTP Na WordPress Na Google Workspace na Nyocha abụọ
Abụ m nnukwu onye nkwado nke Ihe nyocha abuo abuo (2FA) N'elu ikpo okwu niile m na-agba. Dịka onye na-arụ ọrụ na ndị ahịa na ndị ahịa data, enweghị m ike ị ga - akpachapụ anya gbasara nchekwa ka njikọ nke okwuntughe dị iche iche maka saịtị ọ bụla, na - eji Apple Keychain dị ka ebe nchekwa paswọọdụ, ma na - enyere 2FA aka na ọrụ ọ bụla kwesịrị.
Email nke na-abịa site na ihe nkesa gị anaghị abụ nke ọma na nke ọma site na usoro nnata email ka SPF ma ọ bụ DKIM. Nke ahụ pụtara na ozi ịntanetị ndị a nwere ike ịdọrọ na folda junk.
Don't nweghị ndekọ nke ozi ịntanetị niile na - apụ na sava gị. Site na izipu ha site na akaụntụ Google Workspace (Gmail) gị, ị ga-enwe ha niile na folda ezitere gị - yabụ ị nwere ike inyocha ụdị ozi saịtị gị na-eziga.
N'ezie, azịza ya bụ ịwụnye ngwa mgbakwunye SMTP nke na-eziga ozi-e gị na akaụntụ Google Workspace gị kama ịbụ nke a na-agbanye na sava gị.
Ịchọrọ ịtọ Microsoft Kama? Pịa ebe a
Ntọala maka Oghere Google ndị mara mma dị mfe:
Port maka SSL: 465
Nke a bụ otu o si dị (Adịghị m egosipụta ubi maka aha njirimara na paswọọdụ):
Ihe nyocha abuo abuo
Nsogbu a bu ugbua nyocha. Ọ bụrụ na ịnwere 2FA na akaụntụ Google gị, ịnweghị ike ịdenye aha njirimara gị (adreesị ozi-e) na paswọọdụ n'ime ngwa mgbakwunye ahụ. Ga-enweta njehie mgbe ịnwale nke na-agwa gị na ịchọrọ 2FA iji mezue nyocha nke ọrụ Google.
Agbanyeghị, Google nwere azịza maka… a na-akpọ App Okwuntughe.
Google wọkspeesi App Okwuntughe
Oghere ọrụ Google na-enye gị ohere ịme okwuntughe ngwa nke anaghị achọ nyocha ihe abụọ. Ha na-ihu oma otu nzube style paswọọdụ i nwere ike iji na email ahịa ma ọ bụ ndị ọzọ na-atọ ndị ọzọ nyiwe… na nke a gị WordPress saịtị.
Ka ịgbakwunye wọkspeesi App Paswọdu:
Banye na nke gi Akaụntụ Google.
n'okpuru Googlebanye Google, họrọ App Okwuntughe.
họrọ Ndị ọzọ, ma dee aha saiti gi ma weputa okwuntughe.
Google ga - enyere paswọọdụ aka ma nye gị ya ka inwee ike iji ya nyocha.
Tags: 2faGmailokwuntughe ngwa googleozi mailoghere ọrụ googlegsuiteSMTPsmtp ngwa mgbakwunyena-akpata NyochaWordPresswordpress plugin